Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana 250A | China 250A Cable Accessories Factory
25kV 250A mahitsy mpampitohy
Anhuang manokana amin'ny mpampitohy mahitsy, manome mpampitohy mahitsy avo lenta izahay. Endri-javatra: ● Manome fifandraisana feno azo zahana sy azo zahana tanteraka azo zahana ao anaty volo na plug. ● Teboka fanandramana capacitive namboarina hamaritana ny toetran'ny fizaran-tany na hametrahana mari-pamantarana diso. ● Tsy misy fepetra takiana mazava amin'ny fidiovana. ● Ny fametahana dia mety mitsangana, mitsivalana na zoro rehetra eo anelanelany Fampiharana: • Ho an'ny fifandraisana amin'ny tariby polymerika amin'ireo mpanova, switchgear, motera ...
Anhuang manokana amin'ny Loadbreak Elbow Connector, manolotra Loadbreak Elbow Connector avo lenta izahay. Endri-javatra: l Manome fifandraisana feno azo zahana sy azo zahana tanteraka azo zahana ao anaty volo na plug. l Teboka fanandramana capacitive namboarina hamaritana ny toetoetran'ny fizaran-tany na hametrahana mari-pamantarana diso. l Tsy misy fepetra fidiovana farafahakeliny. l Fametrahana dia mety mitsangana, mitsivalana na zoro rehetra eo anelanelany. Fampiharana: l Ho fampifandraisana ny tariby polymerika amin'ireo mpanova, swi ...
25kV 250A satroka fiarovana
Anhuang manokana amin'ny satroka fiarovan-tena voaro, manome topi-miaro voaro amin'ny insulated avo lenta izahay. 25kV 250A Insulated Protective Cap dia fitaovana fantsom-pitaovana natao hanamboarana insulate electrique sy mekanika tombo-kase mampitohy bushing inter tarehy. Rehefa ampifandraisina amina vokatra tapaka ny enta-mavesatra ary mifatotra amin'ny tany ny tariby mandeha, ny Cap Insulated Protective dia manome fonony miaro sy manitrika feno volo feno zahana. Ny Cap Fiarovana voaro dia azo ampiasaina maharitra na vonjimaika ...
25kV 250A nanitatra fitaovam-piadiana miaraka amin'ny zipo
Anhuang manokana amin'ny Manitatra Bushing Bushing, mamatsy Bushing Fitaovana avo lenta avo lenta izahay. Fitarihan-kevitra: 25kV 250A Fitaovana Bushing dia manome ny interface ho an'ny mpampitohy 200A Cable ary ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny fitaovana mitafy menaka (R-temp, hydrocarbon, na silôna), ao anatin'izany ny switchgear, transformer ary capacitor. Ny Fitaovana Fitaovana dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fingotra Epoxy avo lenta, mahafeno ny fepetra takian'ny EN50180 / EN50181 DIN47636 / HN52-S-61 mahazatra. Kit anatiny: ● Fitaovana bushi ...
25 kV 250A Fitaovana bushing
Standard: ● DIN 47636-7-1990 Tariby mitondra herin'ny connexement, azo sarahina, miaraka amin'ny Um ambanin'ny 35kV haben'ny fitaovana mpampitohy Sub ● Connect Semiconductor Sheaths for High - Voltage Cable Fittings and Detachable Insulated Connect; IEEE. ● IEC60502 tariby mitondra herinaratra voarohirohy miaraka amin'ny herinaratra voamarina manomboka amin'ny 1 kV (Um = 1.2 kV) ka hatramin'ny 30 kV (Um = 35 kV) sy ny annex; ● Fomba fanandramana IEC61442 ho an'ny kojakoja ho an'ny tariby herinaratra misy herinaratra miisa 6kV (Um = 7.2kV) ka hatramin'ny 30kV (Um = 35kV); ● GB 12706-2002 Extruded i ...